Zidane Zidane Oo Albaabada U Furay Inuu Macalin U Noqdo Juventus.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Zidane Zidane oo albaabada u furay inuu macalin u noqdo Juventus.
Zidane Zidane ayaa albaabka u furay inuu ku soo laabto Juventus madaama cadaadiska uu kusii kordhayo macalinka haatan maamula juventus ee Andrea Pirlo.
Juve ayaa loo qorsheeyay inay isbedel ku sameyso kooxda ka dib markii ay si xun u ciyaareen 2020-21 taasoo keentay inay ka baxaan Champions League goor hore oo ay si fiican uga dambeeyaan kooxda Inter ee Serie A.
Zidane, oo u soo ciyaaray Bianconeri intii u dhaxeysay 1996 iyo 2001, ayaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah musharixiinta ugu waa weyn ee bedelaya Pirlo, waxaana uu si maldahan u sheegay inuu u furi doono fursada ka dib kulankiisii ugu dambeeyay ee Real Madrid.
Previous articleDowlada Talyaaniga oo xaqiijinaysa in taageerayaashu ay ka qeybgali karaan ciyaaraha Euro 2020 ee Rome.
Next articleLucas Vazquez oo ka hadlay Ku biirista Kooxda Manchester United